Nanampy tosika ireo mpikatroka amin’ny fihetsiketsehana ny artista hanavotana ny fitahirizan-drano ao an-drenivohitr’i Kazakhstan · Global Voices teny Malagasy
Nanjary fitaovam-panoherana mahery vaika ilay fampisehoana ara-javakanto nanoherana ireo bilidaozera.
Voadika ny 15 Septambra 2021 4:49 GMT
Aigerim Ospan, mpanakanto mpanao fampisehoana, milalao kobyz, zavamaneno nentim-paharazana Kazakh, eo amin'ny fitahirizan-drano maina, lasa toerana fananganana ankehitriny. Pikantsary avy amin'ny horonantsarin'i Azattyq Radiosy YouTube.
Hita amin'ny sary aoriana, ireo fiarabe manangana tranobe vaovao ao amin'ny faritra tsy mitsaha-mihitatra ao Nur-Sultan, renivohitr'i Kazakhstan. Ao anatin'izany, niseho ny ady tsy nampoizina eo amin'ny toerana maina misy ny fitehirizan-drano ao Malyi Taldykol: mifanatrika amin'ireo bilidaozera sy ny ekipa mpanao trano ireo mpanakanto mitafy akanjo Kazakh nentim-paharazana sy mitendry zavamaneno nentim-paharazana.
Tamin'ny 7 Septambra, nanapa-kevitra ny hanao fihetsiketsehana ireo mpikatroka taorian'ny nahitan'ireo izy ireo fa handroso amin'ireo drafi-panorenany ao amin'ny fitehirizan-drano ny fiadidian'ny tanàna.
Aigerim Ospan sy Askhat Akhmedyarov, mpanakanto roa malaza amin'izao fotoana izao, ampian'ny sasany amin'ireo mpanao fanentanana efa hatry ny ela ao amin'ny fikambanana tsy ofisialy SOS Taldykol no nanao fampisehoana an-tsariohatra, nanokatra ny tànany sady nijoro nanoloana ny lalan'ireo bilidaozera nantsoin'ny orinasa mpanao trano.
Nilalao ny kobyz, lokanga nentim-paharazana, i Ospan teo alohan'ny lelan'ny bilidaozera nanesoeso tamin'ny feon'ny moterany raha nanako naneno nanodidina ny mpiasa sy ny mpikatroka ary ireo mpanao gazety ny mozikany.
Fihetsiketsehana tsy voahozongozona
Nandritra ny volana maro, niezaka nisarika ny saina tamin'ny fahasimban'ny tahirin-drano manodidina ny renivohitra ireo mpikatroka mafàna fo. Tamin'ny volana Martsa, nametraka sarivongan-dranomandry vorona am-polony tao amin'ny lalambe tao an-drenivohitra ny mpanakanto Aisuluu Shaikenova. Natao ho fanoharana amin'ny faharitan'ny rano miandalana ao Kazakhstan ny fitsonik'izy ireo miadana.
Tamin'ny fahavaratry ny taona 2020, nanangana ny hetsika SOS Taldykol ireo mpikatroka taorian'ny nanambaran'ny governemanta fa hanangana valan-javaboary eo amin'ny toerana misy ny farihin'i Malyi Taldykol izy ireo.
Ho valin'ny fitakian'ny vahoaka, tamin'ny volana Desambra teo dia nilaza ny ben'ny tanànan'i Nur-Sulta, Altai Kulginov, fa ho arovana ny farihy.
Tsy hisy olona hikasika ny farihy. Raha ny marina, fanangonan-drano io fa tsy farihy. Matyi Taldykol no iantsoan'ny olona azy matetika. Hanao faritra fialamboly akaikin'ny Farihy Taldykol [farihy akaiky eo] izahay miaraka zaridaina sy lalana fandehanan-tongotra ho an'ny olona.
Tamin'ny fahavaratry ny taona 2021 anefa, tonga tany Malyi Taldykol ny bilidaozera ary nanomboka nanao ny asa fanorenana, niteraka hetsi-panoherana bebe kokoa avy amin'ireo mpikatroka mafàna fo.
Ny faharitan'ny rano tsikelikely no olana lehibe amin'ny fitahirizan-drano ka manimba ny tontolo iainany. Nahatonga ny Malyi Taldykol ho lasibatra amin'ny fandrosoana vaovao ny fitomboan'ny filàna tany ho an'ny fananganan-trano ivelan'ny renivohitra.
Nilaza tamin'ny fantsom-baovao 24.kz i Ruslan Urazaliyev, mpikaroka ao amin'ny Fikambanan'ny Fimaroan-javamananaina ao Kazakhstan fa tsy handratsy vokatra ho an'ny tontolo iainana manodidina ny fitahirizan-drano ny drafitra fampiroboroboana ny trano sy tany.
Misy drafitra fananganana manimba ho an'ny faritra, izay lemaka mando. Mifanohitra amin'ny lalàna momba ny tontolo iainana sy ny fahaizana mandanjalanja izany. Hisy trano fonenana vaovao sy sekoly ary fotodrafitrasa hafa hiseho eto.
Mety hanosika ny manampahefana handinika ny drafi-panorenan'izy ireo ny akon'ny fanatanterahana ny fihetsiketsehana, izay nahatratra ny lazany tao amin'ny tambajotra sosialy tao Kazakhstan. Na izay farafaharatsiny no antenain'ireo mpikatroka.